Na-n'ise Manufacturers na Suppliers | China Na-n'ise Factory
Na-bolt na-mepụtara ka a akụkụ nke osisi akara ngwaike.
Nke a ike akara ngwaike bụ deadend hardware, nwere ike ịbụ iji na nkwusioru clamps, bọl anya, ejikọta otu efere, ị-clevis, clevis anya na wụnye (OPGW - ngwa anya n'ala wires) na ADSS (niile na-dielectric na-akwado onwe), AAAC, ACSS, ACSR, iferi kpuchie ụdị nnyefe na-eduzi.
Ọzọkwa U n'ise-eji dị ka waya eriri clip na casted akụkụ, iji fixate onye na-eduzi ma ọ bụ eriri n'ime ya, site tightening na akụ.
Ndị ụdị echichi na-agụnyekarị preformed Ihọd grips. Nke a na ozi na-egosi Helical akara oyiyi akwa ebe anyị na saịtị weebụ.
Ndị ngwa gabiga okpomọkụ ịgba ígwè na merela agadi ule, corrosion eguzogide ule, erughị ala ule na nzukọ na nke kwesịrị ekwesị osisi akara ngwaike
High ike ọcha belata ihe ize ndụ nke cable ukwu ma ọ bụ ndị ọzọ mmebi ini ọrụ oge nke efefe ike akara. Imeli wuo obi ike na nsogbu proofed arịọnụ Ọdịdị nke elu voltaji cable na efefe nnyefe e.
Efefe Line U-kpọchie, KGP-7-3